လက်တစ်မျိုးတည်း မော်ဒယ်လုပ်ရုံနဲ. တစ်ရက်ကို $9000 ဝင်ငွေရနေတဲ့ အမျိုးသမီး – Myanmar
လက်တစ်မျိုးတည်း မော်ဒယ်လုပ်ရုံနဲ. တစ်ရက်ကို $9000 ဝင်ငွေရနေတဲ့ အမျိုးသမီး
သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လက်အရမ်းလှနေတဲ့ မိန်းကလေးမျိုးတွေကို တွေ့ဖူးကြမှာပါ။လှပတဲ့ လက်တစ်စုံ ကြောင့်ဝင်ငွေ ဖြောင့်နေတဲ့ သူလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အကြောင်းကို ပရိသတ်တွေ အတွက် ဖော်ပြ ပေးချင်ပါတယ်။ သူမရဲ့ နာမည်ကတော့ Nina Taylor ပါ။သူမကတော့ အရမ်းကို လှပတဲ့ လက်တစ်စုံကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး အဲ့ဒီလို အရမ်းလှတဲ့ လက်လေးတွေကြောင့်ပဲ တစ်နေ့ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ($9000 ) ရ နေသူပါ။သူမရဲ့ အလုပ် ကတော့ Hand Model(လက်မော်ဒယ်) ပါ။
Nina Taylor ကတော့ သူမရဲ့ လက်လေးကို အသုံးချပြီး အလုပ်လုပ်စားလာတာ နှစ် (၃၀) လောက်ရှိ နေပါပြီ။ တစ်ချို့ နာမည်ကြီး ကြော်ငြာ campaigns တွေမှာ သူမက လက်မော်ဒယ် အဖြစ် နဲ့ ပါဝင် ပေးလာခဲ့တာပါ။သူမရဲ့ Nickname ကတော့ “Kate Moss of hand models.” ပါ။Kate Moss ကတော့ အရမ်းကို လှတဲ့ နာမည်ကြီး စူပါမော်ဒယ်ပါ။ Nina က တစ်ခါ တစ်လေကျရင် Kate Moss ရဲ့ အစားထိုး လက်မော်ဒယ် အဖြစ် နဲ့ ကြော်ငြာ တွေ မှာ ပါဝင် ပေးရတာမျိုးရှိပါတယ်။ Kate Moss ရဲ့ ကြော်ငြာတွေမှ
ာ Kate Moss ရဲ့ လက်အစား Nina ရဲ့ လက် ကို အစားထိုး ထည့် တာပါ။ Nina ရဲ့ လက်ချောင်းလေးတွေက Jennifer Lawrence Scarlet Johansson, Nat alie Imbruglia, Demi Moore ၊ Eva Herzigova တိုရဲ့ လက်ချောင်းလေးတွေ အဖြစ် လည်း သရုပ်ဆောင် ခဲ့ဖူးပါတယ်။အနုပညာရှင်တွေရဲ့ အစားထိုးလက်နေရာမှာတင်မဟုတ်ပဲ သူမရဲ့ လက်ချောင်းလေးတွေက လက်ကိုပဲ သီးသန့် ပြတဲ့ ကြော်ငြာတွေ အများကြီး မှာလည်း ပါဝင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
လက်သည်းနီ ကြော်ငြာ၊လက်ဝတ်ရတနာ ကြော်ငြာ …အစရှိတဲ့ လက်ကိုပဲ သီးသန့် ပြတဲ့ TV၊မဂ္ဂဇင်းနဲ Billboard ကြော်ငြာတို့ မှာလည်း သူမ လက်မော်ဒယ် အဖြစ် ပါဝင် ပေးခဲ့ သူပါ။နောက်ပိုင်း မှာတော့ ဈေး ကွက် က တောင်းဆို မှု အရမ်း များလာတော့ သူမရဲ့ ဝင်ငွေ ဟာ တစ်နေ့ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၉) ထောင် လောက် ဝင် ငွေ ရလာခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ လက်မော်ဒယ် ဘ၀ အကြောင်းကိုတော့ Channel5documentary Million Pound Hand Job မှာ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဈေးကွက်က တောင်းဆိုမှု အရမ်းများလာတော့ သူမဟာ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Brand တွေ အများကြီးနဲ့ လက်တွဲ လုပ်ရတဲ့ အထိ အောင်မြင်လာခဲ့တယ်လို ဆိုပါတယ်။
“လက်ကိုပဲ ဖော်ပြရတာဆိုတော့ နာမည်ကြီးတာမျိုးလည်း မရှိဘူး။ဒီတော့ တခြား အရှုပ်အရှင်း ကိစ္စတွေလည်း မရှိဘူး။ဘယ် Brand နဲ မဆို လက်တွဲ လုပ်လို့ လဲ ရတယ်။တစ်နေ့တည်းမှာပဲ အကုန်လုပ်လို့ရတယ်..” လို့ မျက်နှာဖော်ပြ ခြင်းမခံ ရ တဲ့ လက်မော်ဒယ် ဘဝရဲ့ အားသာချက်ကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာကျော်ဒီဇိုင်နာ Tom Ford, Chanel, Fendi ၊ Lulu Guinness တို့နဲ့ လည်း လက်တွဲ အလုပ်လုပ်နေသူပါ။လက်မော်ဒယ် တစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ သူမဘက်က ဂရုစိုက်ပေးရတဲ့ အရာတွေလည်းရှိပါတယ်။
သူမဘက်က လုပ်ပေးရတဲ့ အရာကတော့ လက်ကို တခြားသာမန်လူတွေထက် ပိုပြီး ဂရုစိုက် ပေးရတာပါ။လက်သန့်ရှင်းရေး၊ထိခိုက်ဒဏ်ရာ မရဖို့ကို အရမ်း ဂရုစိုက်ပေးရတာပါ။လက်ကို ဂရုစိုက်ပေးရတာမို့ …” သစ်ပင် ပန်းမန် စိုက် ပျိုး တာမျိုး တွေ ၊ဂစ်တာ တီးတာမျိုးတွေကို ကျမလုပ်ချင်လာခဲ့ရင်တောင်မှ ကျမ ရှောင်ရတယ်….” ဆိုပြီး လက်ကို ထိခိုက် စေမယ့် အရာမျိုးတွေဆိုရင် သေးသေေးလေးက အစ ရှောင် ရတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။လက် အစားထိုး မော်ဒယ် လုပ် ပေးဖို့ တောင်းဆိုခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်း သူမ အစားထိုးပေးရမယ့် လူရဲ့ လက်က မလှ လို့ သူမရဲ့ လက်ကို သုံးတာမဟုတ်ပဲ ဒါဟာ ကျွမ်းကျင်မှု အတတ်ပညာကြောင့်သာ တောင်းဆိုတာပါလို ပြောခဲ့ပါတယ်။
” ဒီ နေရာမှာ ကျတော့ ကျွမ်းကျင်မှု အတတ်ပညာက လိုတယ်လေ။ဒီလို အနုစိတ်ဖော်ပြ ရတဲ့ အလုပ်ဆိုတာ ကျွမ်းကျင်မှု ရှိမှ ရတာ…” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။လက်ကို အသုံးချပြီး ကြော်ငြာ ချင်တဲ့ ပစ္စည်းကို ဘယ်လို ကြွကြွရွရွလေး ဖော်ပြ ရမလဲ ဆိုတဲ့ ကျွမ်းကျင်တဲ့အတတ်ကို ဆိုလိုတာပါ။သူမရဲ့ လက်မော်ဒယ် အလုပ်က သူမအစားထိုး လုပ် ပေးရတဲ့ သူတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် တော့ အများကြီး ဈေးသက်သာတယ်လို့ လည်း ပြောခဲ့ပါတယ်။” Shot တစ် Scene အတွက် ကျမက ရိုက်ကွင်းမှာ တစ်နေကုန်လဲ နေနိုင်တယ်။ကျမက Kate Moss ထက် အများကြီး ပိုဈေးသက်သာပါတယ်…” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒါလေးတွေကိုကြည့်ရင်း သင့်အဖေကိုသင်ပိုချစ်မိသွားစေမယ်ဆိုတာ သေချာပြောရဲတယ်
မှန်နဲ့ဆောင့်မိပြီး ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်လဲကျသွားတဲ့ သူငယ်ချင်းကိုရယ်မိလို့ ပိုဆိုးတဲ့အဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူရဲ့ (ရုပ်သံ)